Lan အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မရလို. - MYSTERY ZILLION
Lan အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မရလို.
Vote Up0Vote Down zawmoekyaw December 2009 Posts: 0Registered Users သူငယ်ချင်းများ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် LAN network ထဲမှာ တလုံးက အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်လုံး၀ မရပါ ။ files တွေ တော. share လို.ရတယ် ။ server ကိုလည်း ping ကြည်.လို.ရတယ် ။ setting တွေ အားလုံး ကျွန်တော် သိတလောက် လိုက်ချိန်ပြီးပြီ ဗျာ အင်ပီလည်း ပေးပြီး။အဲ friewall ကိုတော. ပိတ်လို. မရ (ဖွင်.တာလား ပိတ်ဒါလားမသိတော.ပါ) သူက error အဲတိုင်တက်ပါတယ် Firewall setting သွားတိုင်း---"Windows cannot start the windows Firewall/Internet Connection sharing(ICS) services."ဆိုပြီး Error တက်ပါတယ်..။ ဘယ်လို လုပ်သင်.တယ် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရအောင်..ကူညီပါအုံး၊windows xp pack3ပါ။	5 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down thinkata December 2009 Posts: 0Registered Users You must restart Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) service. You open Control Panel -> Administrative Tools ->Services and rightclick on Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) and selectProperties. The StartUp type should be Automatic.	Vote Up0Vote Down minthawtha December 2009 Posts: 67Registered Users ိကျနော် လဲ တစ်ခါ ဖြစ်ဘူးတယ် ၀င်ဒိုးတင်လို်က်မှာအဆင်ပြေသွားတယ် :d:d:d	Vote Up0Vote Down zawtk December 2009 Posts: 545Registered Users zawmoekyaw said:သူငယ်ချင်းများ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် LAN network ထဲမှာ တလုံးက အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်လုံး၀ မရပါ ။ files တွေ တော. share လို.ရတယ် ။ server ကိုလည်း ping ကြည်.လို.ရတယ် ။ setting တွေ အားလုံး ကျွန်တော် သိတလောက် လိုက်ချိန်ပြီးပြီ ဗျာ အင်ပီလည်း ပေးပြီး။အဲ friewall ကိုတော. ပိတ်လို. မရ (ဖွင်.တာလား ပိတ်ဒါလားမသိတော.ပါ) သူက error အဲတိုင်တက်ပါတယ် Firewall setting သွားတိုင်း---"Windows cannot start the windows Firewall/Internet Connection sharing(ICS) services."ဆိုပြီး Error တက်ပါတယ်..။ ဘယ်လို လုပ်သင်.တယ် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရအောင်..ကူညီပါအုံး၊windows xp pack3ပါ။အဲဒါဗိုင်းရပ်ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်.. ဘာ အဒေါ်ဗိုင်းရပ်..:P သုံးထားလဲ..ဟင်.. ဖြစ်နိုင်ရင်..Kasper..လေးကို.. Update ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသတ်ကြည့်လိုက်ပါ.... ကျွန်တော်လည်း.အဲဒါမျိုးတွေကြုံဖူးပါတယ်..စက်မှာ..တစ်လုံးထဲတောင်မကပါဘူး. Lan မှာ ရှိတဲ့..စက်အကုန်လုံးဖြစ်တာပါ.. အဲဒါ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.. ဆာဗာ မှာ..ဗိုင်းရပ်၀င်ကိုက်သွားလို့ပါ.. အဲဒါနဲ့ ဆာဗာ..ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တော့ Client တွေမှာ..ဘာမှ..တောင် မလုပ်လိုက်ရဘူး အားလုံ အိုကေသွားပါတယ်..အဆင်ပြေပါစေ..ခင်ဗျာ..	Vote Up0Vote Down zawmoekyaw December 2009 Posts: 0Registered Users thinkata said:You must restart Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) service. You open Control Panel -> Administrative Tools ->Services and rightclick on Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) and selectProperties. The StartUp type should be Automatic.ဖြေပေး ကျတဲ. သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်ကို ပြောတလို ကျွန်တော် လုပ်ကြည်.ဒါလည်း မရပါဘူး start up type က လည်း Automatic ပါပဲ ၊မသေချာလို. restart လုပ်ကြည်.ပြီးပြီ ။ မရပါ...ကြံရာ မရတဲ. အဆုံး အောက် က အစ်ကို ပြောတလို windows ကို repair လုပ်လိုက်ပါတယ် .. အဲကျမှ အဆင်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ .. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။reply နောက်ကျ တဲ. အတွက်လည်း ခွင်.လွတ်ပါ။ကျနော် လဲ တစ်ခါ ဖြစ်ဘူးတယ် ၀င်ဒိုးတင်လို်က်မှာအဆင်ပြေသွားတယ် :d:d:d	Vote Up0Vote Down Morris December 2009 Posts: 1,740Moderators ကျွန်တော်တို ့ကျောင်းမှာလည်းအဲဒီအတိုင်းပါပဲ ပိတ်ချင်ပိတ်လိုက်ဖွင့်ချင်ဖွင့်လိုက်နဲ့သူတို ့လက်ထဲမှာပါပဲ server ကိုလည်း ping ကြည့်လို ့ရတယ် ဒါပေမယ့် သုံးလို ့မရဘူး firewall တို ့ဘာတို ့နဲ ့ကာထားတာနေမှာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းသိပ်မသိလို ့ဘာမှမလုပ်တက်ဘူး	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
December 2009 Morris
December 2009 thinkata
December 2009 zawmoekyaw
December 2009 zawtk
December 2009 Powered by Vanilla